သားသမီးတွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုကနေ ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ
22 Sep 2018 . 12:02 PM
ဒီစာလေးက မေမေတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ သမီးချောလေးတစ်ယောက်ရှိနေတာဟာ မိခင်တိုင်းအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရတနာတစ်ပါးပါပဲ။ သူတို့လေးတွေ ကျော့ကော့လှပစွာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာတာကို ကြည့်ရင်း နှစ်သိမ့်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ်ကြီးဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပို ပိုပြီး ပျက်စီးယိုယွင်းလာတဲ့အခါကျတော့ လှပလာလေလေ ကြောက်ရလေလေပါပဲ။ သမီးလေးက ကလေးငယ်လေးဘဝကနေ တဖြည်းဖြည်း လှသွေးကြွတဲ့ အပျိုစင်လေး အဖြစ် ကြီးပြင်းလာပြီ။ သူတို့မမြင်နိုင်ဘဲ အနီးဆုံးနေရာမှာရှိနေတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် တားဆီးကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုမျိုး ခွန်အားပေးရမလဲ။ သေချာတာကတော့ သူတို့လေးတွေသွားသမျှ နေရာတကာကို မိခင်တွေ တကောက်ကောက် လိုက်လို့မရတာသေချာပါတယ်။ လိုက်လည်း မလိုက်သင့်ပါဘူး။ ဒီတော့ သူတို့ကိုပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်အောင် သင်ကြားပြသပေးရတော့မှာပါပဲ။
ညဘက် ဘယ်အချိန်ထိတော့ ညနက်အောင် လျှောက်လည်လို့ရမယ်။ ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေတော့ တစ်ယောက်တည်းသွားလို့မရဘူး။ ဘယ်သူတွေနဲ့ မပေါင်းသင့်ဘူးကစတင်လို့ လိုအပ်တဲ့အကန့်အသတ်လေးတွေကို အပြုသဘော နားသွင်းပြောပြပြီး စည်းကမ်းလေးတွေ ရေးဆွဲပေးပါ။ ဒီလိုကန့်သတ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်း အမိန့်ဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဘာကြောင့် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ အကျိုးဆက်လေးတွေကိုပါ နားဝင်အောင် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြောဆိုပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ “ဒါ ငါ့အမိန့်” ဆိုတဲ့အယူအဆတွေက ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာပဲ ရှိပါတော့တယ်။
အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်လာလို့ ကိုယ့်ရဲ့ သမီးက ရင်ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီဆိုရင် ပထမဆုံး နားထောင်ပေးပါ။ နားမထောင်ပေးတဲ့သူတွေကတော့ ဘာမှသိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နားထောင်နေရုံနဲ့လည်း မပြီးသွားသေးပါဘူး။ ထပ်ပြီးလုပ်ပေးရမှာကတော့ နားလည်ပေးဖို့ပါပဲ။ နောက်ဆုံး ရည်းစားထားတာကအစ သမီးဖြစ်သူက ယုံယုံကြည်ကြည်ဖွင့်ပြောပြလာပြီဆိုရင် နားထောင်ပေးပြီး နားလည်ပေးပါ။ နောက်ပြီးမှ ဖြစ်သင့်တာကို ပြောဆိုဆွေးနွေးပေးပါ။ ဒီလိုအလေ့အကျင့်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေများလာပြီး ကြာလာတဲ့အခါ အချိန်နှောင်းမှ သိရတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်ရှုပ်ပါစေ ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးကို အချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးတော့ ဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံပါနဲ့။ အနီးနားမှာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေခြင်းက ကလေးတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတာတွေကို ချက်ချင်းသိမြင်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းမှာ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုမရရှိတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေဟာ ပြင်ပသူစိမ်းတွေဆီက မေတ္တာကို မက်မောကြလေ့ရှိတာကို သတိထားရပါမယ်နော်။ ကိုယ်က ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာနဲ့ ရင်အုပ်မကွာနေမှ အချိန်မလွန်ခင် သိရှိရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ တားဆီးရမယ့်ကိစ္စတွေကို မိဘတွေအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ။ သားသမီးရဲ့ ပထမဆုံးသူက ကိုယ်ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အများစု လူငယ်တွေ အသက်ဆုံးပါးရတဲ့အထိ လမ်းမှားရောက်သွားကြရတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပဲရှိပါတယ်။ “အမေက ငါ့ကို သတ်တော့မှာပဲ။” ဆိုတဲ့စကားပါ။ ဒီစကားဟာ ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲနဲ့ ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အနီးဆုံးရှိနေတဲ့ မိဘတွေကတောင် သတ်တော့မှာပဲလို့ ခံစားလိုက်ကြရပြီဆိုရင် ခိုကိုးရာမရှိတော့တဲ့အတွက် ဘ၀ကြီးပျက်စီးသွားသလို ခံစားလာရတာကနေစတင်ပြီး မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ အမှားတွေ ဘယ်လောက်ကြီးပဲဖြစ်လာပါစေ၊ ပြဿနာတွေ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ တက်လာပါစေ မိဘတွေက အတူတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးဖို့ အသင့်ရှိတယ်ဆိုတာကို သူတို့လေးတွေသိပါစေ။ အပြစ်မတင်ဘဲ ကူညီဆယ်ယူရမှာက မိဘတွေရဲ့ တာဝန်လို့ ထင်ပါတယ်။ ခုန အပေါ်ကပြောခဲ့သလို အချက်တွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ သားသမီးနဲ့ မိဘတွေဆိုရင်တော့ ဒီအဆင့်ထိကို ရောက်မလာဘူးဆိုတာ အာမခံနိုင်ပါတယ်။ အပေါ်ကလို ချစ်ခင်ကြင်နာနားလည်ပေးနေတဲ့မိဘတွေလက်ထဲက သားသမီးတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ဆိုးဆိုးရွားရွားမဖြစ်ကြပါဘူး။
မြန်မာတွေရဲ့ အရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့ ရှေးရိုးအစဉ်အလာတွေက တချို့သော ဒုက္ခတွေကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလို့ ပြောပါရစေ။ အမေနဲ့ အဖေဖြစ်သူကလည်း ကိုယ့်သားသမီး လူပျို၊ အပျိုလေးတွေကို လိင်မှုရေးရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာပေးဖို့ရှက်ကြတယ်။ သားသမီးတွေကလည်း မိဘဖြစ်သူကို မေးမြန်းဖို့ ကြောက်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ တန်ဖိုးတွေ၊ သွေးသားဖွဲ့စည်းပုံတွေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေကို အရှက်အကြောက်တွေကြောင့် ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးဖို့ နှောင့်နှေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှမသိဘဲ ဖြူစင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကို သားရဲလောကထဲ “ရော့ …… အင့်” ဆိုပြီး ပစ်ချလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
လိင်စော်ကားမှုတွေနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကြုံတွေ့နေနိုင်တာမို့လို့ အရင်ဆုံး သင်ကြားပေးရမယ့် နည်းစနစ်ကတော့ သတ္တိပါ။ သူတို့ကို ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာ ကြောက်ရွံ့နေတာထက် ကြံ့ခိုင်ပြီး သတ္တိရှိအောင် သင်ကြားပြသပေးထားပါ။ နောက်ပြီးမှ လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်ခံကာကွယ်မှုနည်းပညာတွေ၊ အသိပညာတွေနဲ့ အခုဆိုရင် မိန်းကလေးတွေအတွက် ငရုတ်ကောင်းစပရေးဘူးစတဲ့ အရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေပါ ၀ယ်လို့ရနေပြီဆိုတော့ ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုပါ ၀ယ်ယူပြီး ပေးထားပါ။ ဒါမျိုး နည်းစနစ်နဲ့ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ သတ္တိရော၊ ပညာရော ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီး ကြောက်စရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။
မိန်းကလေးတွေဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လမ်းမပေါ်မှာ၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ၊ ရုံးတွေကျောင်းတွေမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှု၊ လိင်စော်ကားမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကို နှုတ်နဲ့တစ်မျိုး၊ အမူအရာနဲ့တစ်မျိုး၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက်တစ်မျိုး အမျိုးမျိုးခံစားနေရပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ နေထိုင်ပုံ၊ ပြောဆိုဆက်ဆံပုံစတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ယဉ်ကျေးမှုမရှိဘဲ ယုတ်မာတဲ့တချို့သော ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အဖိုးတန်သားသမီးတွေကိုလည်း ဒီလို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုတွေကနေ ကာကွယ်နိုင်အောင် ကောင်းမွန်စွာ ပြုစုပျိုးထောင်စောင့်ရှောက်ကြရအောင်လား။
ကိုယျ့အိမျက မိနျးကလေးတှကေို ကာကှယျကွရအောငျလား
ဒီစာလေးက မမေတှေကေို ရညျရှယျပွီး ရေးလိုကျပါတယျ။ ကိုယျ့မှာ သမီးခြောလေးတဈယောကျရှိနတောဟာ မိခငျတိုငျးအတှကျ တနျဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ ရတနာတဈပါးပါပဲ။ သူတို့လေးတှေ ကြော့ကော့လှပစှာ မှေးဖှားကွီးပွငျးလာတာကို ကွညျ့ရငျး နှဈသိမျ့ပြျောရှငျရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုခတျေကွီးဟာလညျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ပို ပိုပွီး ပကျြစီးယိုယှငျးလာတဲ့အခါကတြော့ လှပလာလလေေ ကွောကျရလလေပေါပဲ။ သမီးလေးက ကလေးငယျလေးဘဝကနေ တဖွညျးဖွညျး လှသှေးကွှတဲ့ အပြိုစငျလေး အဖွဈ ကွီးပွငျးလာပွီ။ သူတို့မမွငျနိုငျဘဲ အနီးဆုံးနရောမှာရှိနတေဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာအကွမျးဖကျမှုတှကေို သူတို့ကိုယျတိုငျ တားဆီးကာကှယျနိုငျဖို့ ကြှနျမတို့ ဘယျလိုမြိုး ခှနျအားပေးရမလဲ။ သခြောတာကတော့ သူတို့လေးတှသှေားသမြှ နရောတကာကို မိခငျတှေ တကောကျကောကျ လိုကျလို့မရတာသခြောပါတယျ။ လိုကျလညျး မလိုကျသငျ့ပါဘူး။ ဒီတော့ သူတို့ကိုပဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျနိုငျအောငျ သငျကွားပွသပေးရတော့မှာပါပဲ။
ညဘကျ ဘယျအခြိနျထိတော့ ညနကျအောငျ လြှောကျလညျလို့ရမယျ။ ဘယျလိုနရောမြိုးတှတေော့ တဈယောကျတညျးသှားလို့မရဘူး။ ဘယျသူတှနေဲ့ မပေါငျးသငျ့ဘူးကစတငျလို့ လိုအပျတဲ့အကနျ့အသတျလေးတှကေို အပွုသဘော နားသှငျးပွောပွပွီး စညျးကမျးလေးတှေ ရေးဆှဲပေးပါ။ ဒီလိုကနျ့သတျပေးတဲ့နရောမှာလညျး အမိနျ့ဆိုတာမြိုး မဟုတျဘဲ ဘာကွောငျ့ မလုပျသငျ့ဘူးဆိုတဲ့ အကြိုးဆကျလေးတှကေိုပါ နားဝငျအောငျ အကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့ ပွောဆိုပွဖို့ လိုအပျပါတယျ။ “ဒါ ငါ့အမိနျ့” ဆိုတဲ့အယူအဆတှကေ ရုပျရှငျကားတှထေဲမှာပဲ ရှိပါတော့တယျ။
အကွောငျးကိစ်စတဈခုခုဖွဈလာလို့ ကိုယျ့ရဲ့ သမီးက ရငျဖှငျ့တာပဲဖွဈဖွဈ၊ တိုငျတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ဆှေးနှေးတာပဲဖွဈဖွဈလုပျပွီဆိုရငျ ပထမဆုံး နားထောငျပေးပါ။ နားမထောငျပေးတဲ့သူတှကေတော့ ဘာမှသိရမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ နားထောငျနရေုံနဲ့လညျး မပွီးသှားသေးပါဘူး။ ထပျပွီးလုပျပေးရမှာကတော့ နားလညျပေးဖို့ပါပဲ။ နောကျဆုံး ရညျးစားထားတာကအစ သမီးဖွဈသူက ယုံယုံကွညျကွညျဖှငျ့ပွောပွလာပွီဆိုရငျ နားထောငျပေးပွီး နားလညျပေးပါ။ နောကျပွီးမှ ဖွဈသငျ့တာကို ပွောဆိုဆှေးနှေးပေးပါ။ ဒီလိုအလအေ့ကငျြ့မရှိဘူးဆိုရငျတော့ မိဘနဲ့ သားသမီးကွားမှာ လြှို့ဝှကျခကျြတှမြေားလာပွီး ကွာလာတဲ့အခါ အခြိနျနှောငျးမှ သိရတာမြိုးတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။
ဘယျလောကျပဲ အလုပျရှုပျပါစေ ကိုယျ့ရဲ့ သားသမီးကို အခြိနျမပေးနိုငျတာမြိုးတော့ ဘယျတော့မှအဖွဈမခံပါနဲ့။ အနီးနားမှာ ခဈြခဈြခငျခငျနခွေငျးက ကလေးတှေ နစေ့ဉျနဲ့အမြှပွောငျးလဲနတောတှကေို ခကျြခငျြးသိမွငျခံစားနိုငျပါတယျ။ အိမျတှငျးမှာ ခဈြခငျရငျးနှီးမှုမရရှိတဲ့ ကလေးတှနေဲ့ လူငယျတှဟော ပွငျပသူစိမျးတှဆေီက မတ်ေတာကို မကျမောကွလရှေိ့တာကို သတိထားရပါမယျနျော။ ကိုယျက ခဈြခငျရငျးနှီးစှာနဲ့ ရငျအုပျမကှာနမှေ အခြိနျမလှနျခငျ သိရှိရမယျ့ကိစ်စတှနေဲ့ တားဆီးရမယျ့ကိစ်စတှကေို မိဘတှအေနနေဲ့ ဆောငျရှကျနိုငျမှာပါ။ သားသမီးရဲ့ ပထမဆုံးသူက ကိုယျဖွဈနဖေို့ လိုအပျပါတယျ။
အမြားစု လူငယျတှေ အသကျဆုံးပါးရတဲ့အထိ လမျးမှားရောကျသှားကွရတဲ့ စကားတဈခှနျးပဲရှိပါတယျ။ “အမကေ ငါ့ကို သတျတော့မှာပဲ။” ဆိုတဲ့စကားပါ။ ဒီစကားဟာ ကလေးတှနေဲ့ လူငယျတှရေဲ့ အကွီးမားဆုံးအခကျအခဲနဲ့ ပွဿနာပဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့လေးတှရေဲ့ စိတျထဲမှာ အနီးဆုံးရှိနတေဲ့ မိဘတှကေတောငျ သတျတော့မှာပဲလို့ ခံစားလိုကျကွရပွီဆိုရငျ ခိုကိုးရာမရှိတော့တဲ့အတှကျ ဘဝကွီးပကျြစီးသှားသလို ခံစားလာရတာကနစေတငျပွီး မဖွဈသငျ့တာတှေ ဖွဈလာတော့တာပါပဲ။ အမှားတှေ ဘယျလောကျကွီးပဲဖွဈလာပါစေ၊ ပွဿနာတှေ ဘယျလောကျကွီးပဲ တကျလာပါစေ မိဘတှကေ အတူတူရငျဆိုငျဖွရှေငျးပေးဖို့ အသငျ့ရှိတယျဆိုတာကို သူတို့လေးတှသေိပါစေ။ အပွဈမတငျဘဲ ကူညီဆယျယူရမှာက မိဘတှရေဲ့ တာဝနျလို့ ထငျပါတယျ။ ခုန အပျေါကပွောခဲ့သလို အခကျြတှကေို လိုကျနာကငျြ့သုံးနတေဲ့ သားသမီးနဲ့ မိဘတှဆေိုရငျတော့ ဒီအဆငျ့ထိကို ရောကျမလာဘူးဆိုတာ အာမခံနိုငျပါတယျ။ အပျေါကလို ခဈြခငျကွငျနာနားလညျပေးနတေဲ့မိဘတှလေကျထဲက သားသမီးတှဟော ဘယျတော့မှ ဆိုးဆိုးရှားရှားမဖွဈကွပါဘူး။
မွနျမာတှရေဲ့ အရှကျအကွောကျကွီးတဲ့ ရှေးရိုးအစဉျအလာတှကေ တခြို့သော ဒုက်ခတှကေို ဖွဈစတေဲ့အကွောငျးတရားတဈခုလို့ ပွောပါရစေ။ အမနေဲ့ အဖဖွေဈသူကလညျး ကိုယျ့သားသမီး လူပြို၊ အပြိုလေးတှကေို လိငျမှုရေးရာနဲ့ ပတျသကျပွီး ပညာပေးဖို့ရှကျကွတယျ။ သားသမီးတှကေလညျး မိဘဖွဈသူကို မေးမွနျးဖို့ ကွောကျကွတယျ။ သူတို့ရဲ့ တနျဖိုးတှေ၊ သှေးသားဖှဲ့စညျးပုံတှနေဲ့ အရေးကွီးတဲ့သားဆကျခွားနညျးလမျးတှကေို အရှကျအကွောကျတှကွေောငျ့ ပှငျ့လငျးစှာဆှေးနှေးဖို့ နှောငျ့နှေးနမေယျဆိုရငျတော့ ဘာမှမသိဘဲ ဖွူစငျတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့သားသမီးတှကေို သားရဲလောကထဲ “ရော့ …… အငျ့” ဆိုပွီး ပဈခလြိုကျတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
လိငျစျောကားမှုတှနေဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာအကွမျးဖကျမှုတှကေို နစေ့ဉျနဲ့အမြှ ကွုံတှနေ့နေိုငျတာမို့လို့ အရငျဆုံး သငျကွားပေးရမယျ့ နညျးစနဈကတော့ သတ်တိပါ။ သူတို့ကို ဘာပဲဖွဈလာဖွဈလာ ကွောကျရှံ့နတောထကျ ကွံ့ခိုငျပွီး သတ်တိရှိအောငျ သငျကွားပွသပေးထားပါ။ နောကျပွီးမှ လိုအပျတဲ့ ကိုယျခံကာကှယျမှုနညျးပညာတှေ၊ အသိပညာတှနေဲ့ အခုဆိုရငျ မိနျးကလေးတှအေတှကျ ငရုတျကောငျးစပရေးဘူးစတဲ့ အရေးပျေါကာကှယျရေးပစ်စညျးတှပေါ ဝယျလို့ရနပွေီဆိုတော့ ဒီပစ်စညျးလေးတှကေိုပါ ဝယျယူပွီး ပေးထားပါ။ ဒါမြိုး နညျးစနဈနဲ့ ကာကှယျနိုငျဖို့ သတ်တိရော၊ ပညာရော ပေးထားမယျဆိုရငျတော့ သိပျပွီး ကွောကျစရာလိုမယျ မထငျပါဘူး။
မိနျးကလေးတှဟော နစေ့ဉျနဲ့အမြှ လမျးမပျေါမှာ၊ ဘတျဈကားပျေါမှာ၊ ရုံးတှကြေောငျးတှမှော လိငျပိုငျးဆိုငျရာအမွတျထုတျမှု၊ လိငျစျောကားမှု၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာအကွမျးဖကျမှုတှကေို နှုတျနဲ့တဈမြိုး၊ အမူအရာနဲ့တဈမြိုး၊ ကိုယျထိလကျရောကျတဈမြိုး အမြိုးမြိုးခံစားနရေပါတယျ။ ဒါဟာ ကြှနျမတို့ရဲ့ ဝတျစားဆငျယငျပုံ၊ နထေိုငျပုံ၊ ပွောဆိုဆကျဆံပုံစတဲ့ ကိုယျပိုငျပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဘာမှမဆိုငျပါဘူး။ ယဉျကြေးမှုမရှိဘဲ ယုတျမာတဲ့တခြို့သော ယောကျြားလေးတှရေဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ပဲ တိုကျရိုကျသကျဆိုငျနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ အဖိုးတနျသားသမီးတှကေိုလညျး ဒီလို လိငျပိုငျးဆိုငျရာအမွတျထုတျမှုတှကေနေ ကာကှယျနိုငျအောငျ ကောငျးမှနျစှာ ပွုစုပြိုးထောငျစောငျ့ရှောကျကွရအောငျလား။
by Ngul Ciin . 26 mins ago